मेरो सानै देखि गायक बन्ने सपना हो यसको लागि म निरन्तर लागिरहेको छु – गायक राजेन्द्र पोख्रेल - Public Suchana : Public Suchana
मेरो सानै देखि गायक बन्ने सपना हो यसको लागि म निरन्तर लागिरहेको छु – गायक राजेन्द्र पोख्रेल
लेखक : admin २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०५:३५ मा प्रकाशित
राजेन्द्र बहादुर बिष्ट
गायक राजेन्द्र पोख्रेलको जन्म जिल्ला कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका बडा न, ७ धम्पुस नयाँगाउँ मा भएको हो। उहाँ सानैदेखि नै गीत संगीत प्रती रुचि थियो । रेडियो टेलिभिजन मार्फत गीत संगीत सुन्ने गर्थे सांगीतिक क्षेत्रमा २०७३ साल देखि प्रबेश गरे। लोक तथा दोहोरी गीत प्रती आर्केषित पोख्रेल सांगीतिक यात्रा दोहोरी सांझमा गीत गाएर भएको हो। उहाँ सांगीतिक क्षेत्रमा प्रबेश गर्नु भन्दा अगाडी नै संचार क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँको आवाजमा हाल सम्म ३ बटा गीत बजारमा आएका छ्न ।धम्पुसको ठिटो, तिजैमा संगै नाच्न जाम्ला बैरीलै , सम्झना दिएको फुल रहेको छ । आज हामीले गायक पोख्रेल संग केही कुरा सोधेका छौँ।
तपाईंको सांगीतिक यात्रा कसरी सुरु भयो?
रहरै रहरमा गायक भईयो अझै भने जस्तो भएको छैन कस्ता खालका गीत मन पर्छ। प्राय सबै खालका गीत संगीत मनपर्छ त्यसमा पनि लोकगीत बिशेष हो। बाल्यकालमा गीत संगीत कसरी सुन्नु हुन्नथ्यो ? म १२/१३ बर्षाको उमेरमा नै पोखरा आएको हुनाले त्यति असहजता भने भएन रेडियो टेलिभिजन मार्फत नै सुन्ने गर्थे ।
सांगीतिक क्षेत्र लागेर जीवन थान्न कतिको सजिलो छ?
सांगीतिक क्षेत्र बाट पाएको कुरा?
अरुले देख्ने गरेरनै त्यस्तो ठुलो पाउन सकेको छैन । तर आफ्नो मनको सन्तुष्ट भने मिलेको छ।
सांगीतिक क्षेत्रबाट गुमाएका कुरा?
अबको योजना के रहेको छ?
एउटा् फरक खाल्को सृजना लिएर आउने कोसिस गर्दै छु।
तपाईं गीत संगीत बाहेक के गर्नुहुन्छ ?
अहिले चाहिँ सक्षम जब सर्भिसमा आवद्ध रहेको छु ।
अन्तमा के भन्नुहुन्छ?